के तपाईको मोबाईल ढिलो छ? हामी तपाईंलाई यसको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ बताउँछौं Androidsis
मेरो मोबाइल ढिलो छ
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 15/04/2021 20:00 | एन्ड्रोइड धोखा दिन्छ, ट्यूटोरियलहरू
यो मोबाईल फोनबाट हामी सबैलाई भएको छ। प्रदर्शनले प्रदान गर्दछ जब हामी यसलाई खरीद गर्दछौं र यो बग्ने गतिसँग समयको साथ यो हराउछ। जब सम्म यसले हामीलाई हाम्रो धैर्य पनि गुमाउँदैन। उनीहरु धेरै कारणहरूले तपाईंको स्मार्टफोनलाई ढिलो मोबाइल फोन किन बनाउँदछ, र आज हामी तपाईंलाई उनीहरूको बारेमा बताउनेछौं।
यो एक उपकरणको लागि सामान्य हो, जब हामी यसलाई रिलीज गर्छौं, यसको सबैभन्दा इष्टतम स्तर प्रस्तुत गर्न अपरेसन को। कार्यात्मक प्रदर्शनमा मात्र होइन, यसले उत्कृष्ट ब्याट्री चार्ज स्तर पनि प्राप्त गर्दछ। उसको शारीरिक उपस्थिति उल्लेख नगरी, जो कहिलेकाँही समयको साथमा पनि दु: ख भोग्छ।
1 किन मेरो मोबाइल ढिलो छ?
5 म के गर्न सक्छु ताकि मेरो मोबाईल ढिलो हुँदैन?
6 उपकरण बन्द गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्
7 उपकरण खाली गर्नुहोस्
8 फ्याक्ट्री सेटिंग्स को लागी रिसेट गर्नुहोस्
किन मेरो मोबाइल ढिलो छ?
अहिले यसको कारण पत्ता लगाउन गरौं यसले हाम्रो फोनलाई ढिलो बनाउँदछ। यसैले, कारणहरू के हो वा हामी गलत गर्दैछौं भनेर जान्दै, हामी केहि समाधान राख्न सक्छौं र यो कार्यक्षमता को एक धेरै अधिक स्वीकार्य स्तर ठीक छ। किनकि यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ धेरै जसो केसहरूमा यो सम्भव छ कि हाम्रो स्मार्टफोन रिकभर भयो.
हामीले दिमागमा राख्नु पर्ने मुख्य चीजहरू मध्ये एक हो हाम्रो उपकरण कति पुरानो हो। हामी पूर्ण क्षमतामा अपरेटिंग जारी राख्न तीन वा चार बर्ष भन्दा पुरानो स्मार्टफोनको आशा गर्न सक्दैनौं। हामी विवादास्पद योजनाबद्ध अप्रचलनलाई मात्र संकेत गरिरहेका छैनौं, त्यो मात्र सब भन्दा उन्नत सफ्टवेयर, कहिलेकाँहि मिल्दो हार्डवेयरको लागि पनि आवश्यक पर्दछ.
साथै हामी फरक गर्न पर्छ यदि उपकरण तुरुन्त प्रस्तुत गर्दछ नेभिगेसनमा कठिनाई इन्टरनेट द्वारा। वा हामीले बोलेको ढिलोपनलाई बुझाउँछ सानो तरलता जुन यो सार्दछ आन्तरिक मेनूमा पनि। हामीसँग कभरेज हुन सक्छ वा सिग्नल समस्याहरू पनि छन् जसले हामीलाई विश्वास गर्न सक्दछ कि फोन वास्तवमा बिना राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन।
यहाँ हामी फेला पार्दछौं एक मुख्य भेद जुन एक उपकरणले फेला पार्दछ इष्टतम प्रदर्शनको लागि। जब हामी मोबाइल सुरू गर्दछौं, एक नियमको रूपमा हामी यसलाई उपलब्ध भण्डारणको उच्च प्रतिशतको साथ फेला पार्दछौं। भण्डारण कि महीना वा प्रयोग को वर्ष संग यो पूरा भयो कहिलेकाँही पूर्ण रुपमा कब्जा
केहि फाईलहरू, केहि अनुप्रयोगहरू, र धेरै खाली ठाउँहरूले इष्टतम अपरेटिंग सिस्टम प्रदर्शनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। सामान्य नियमको रूपमा, लगभग पूर्ण मेमोरीको साथ एक स्मार्टफोन एक ढिलो स्मार्टफोन बन्छ। अपरेटिंग प्रणालीले सामान्य रूपमा कार्य गर्नको लागि धेरै अवरोधहरूको सामना गर्दछ। र "सामान्य" प्रदर्शन गर्न तपाईलाई उपलब्ध मेमोरीको अंश चाहिन्छ।
यस बिन्दुमा के गर्नु राम्रो कुरा हो? एक पटक हामीले गन्ती गर्यौं उपकरण मेमोरी पूर्ण रूपमा पूर्ण संग, त्यहाँ धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् भण्डारण डाटा को बोझ कम गर्न। पोष्टको अन्त्यमा हामी तपाईंलाई केही उपयोगी सल्लाहहरू दिइरहेका छौं तपाईको मोबाईललाई के भयो भनेर फिर्ता लिनका लागि। कुनै श doubt्का बिना, सबै भन्दा उपयोगी कार्यहरू मध्ये एक सम्पूर्ण फाइलहरू, अनुप्रयोगहरू, फोटोहरू, आदि मेटाउने थियो। तर यदि तपाइँ यो महसुस गर्नुहुन्छ एक थकाऊ र पनि बोरिंग कार्य त्यहाँ केहि विकल्पहरू छन् यो गर्न केहि सरल चरणहरूको साथ। हामीले जारी गरेको रूपमा उपकरणको साथ यो एक धेरै उल्लेखनीय तरिका मा कायाकल्प हुनेछ र तपाईं सक्षम हुनेछ तपाईंको फोनको फेरि आनन्द लिनुहोस् जस्तै यो नयाँ थियो.
हाम्रो स्मार्टफोनहरूमा हुन सक्ने सबैभन्दा खराब चीजहरू मध्ये एक यो हो कि निर्माताले हाम्रो विशेष मोडेलको अद्यावधिकहरूको साथ "काट" गर्ने निर्णय गर्दछ। यद्यपि के सबै भन्दा उल्लेखनीय छ कि छ हामीसँग सुरक्षा अपडेटहरू छैनन्। सत्य यो हो कि यी अद्यावधिकहरूले उपकरणलाई प्रदर्शन र कार्यक्षमताको सर्तमा अपडेट हुन जारी गर्दछ।
गणना गर्नुहोस् थोरै अपरेटिंग सिस्टम अपडेटहरू यसले हामीलाई बिभिन्न अनुप्रयोग अद्यावधिकहरूको छेउमा छोड्छ जुन अपरेटि system प्रणालीको अनुकूलनको तालमा जान्छ। अनुप्रयोगको पुरानो संस्करणको साथ काम गर्नुहोस् यसले हामीलाई नवीनता विकल्पहरू गुमाउन वा उनीहरूलाई बनाउन पनि सक्छ सामान्य रूपमा कार्य नगर्नुहोस्.
धेरै पटक, खरीदको समयमा नयाँ स्मार्टफोन, पुरानो संस्करणको क्याप्सको सिफारिश गरिन्छ कर्तव्य मा फर्म को। एक नियम पछि, यो एक राम्रो विचार हो किनकि एक बर्ष पछि, एक असाधारण मोबाइल के थियो त यति राम्रोसँग जारी रहनेछ। तर यदि हामी पुरानो संस्करणमा हेर्छौं, अझै पनि अझ धेरै मा सक्षम स्मार्टफोन हुन को लागी, हामी उपकरण प्राप्त गर्न गल्ती गर्न सक्छौं जुन छिट्टै अपडेटहरूबाट बाहिर रहन्छ.
को अनुप्रयोगहरूफोटोहरूका साथ, तिनीहरू हाम्रो मोबाइल को मेमोरी को एक ठूलो हिस्सा कब्जा गर्न को लागी व्यवस्थापन। हामी सबैको लागि अनुप्रयोगहरू चाहन्छौं, कार्यको लागि धेरै, र निस्सन्देह आवश्यक व्यक्तिहरू र यस क्षणको अनुप्रयोग। यो अपरेटि system प्रणालीको आधार हो र स्मार्टफोन तिनीहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो.
अनुप्रयोगहरू तिनीहरू धेरै विकसित भएको छ र प्रत्येक अपडेटको साथ पक्ष सुधार गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता अनुभव अधिक आकर्षक बनाउन को लागी डिजाइन गरीएको। यसले केहि गर्दैन हाम्रो फोनमा अधिक र अधिक ठाउँ लिनुहोस्। र बिस्तारै, यस्तै स्तर स्रोत आवश्यक छ, को प्रयोग को स्मृति र पृष्ठभूमि तत्वहरू बनाउँछ प्रदर्शन बूँदाहरू.
तपाइँ एक वा अर्को अनुप्रयोगमा निर्णय लिनको लागि, विकासकर्ताहरूले उनीहरूलाई सकेसम्म आकर्षक बनाउन प्रयास गर्छन्। प्रत्येक पटक तिनीहरूसँग छ थप सुविधाहरू र प्रयोगको लागि अधिक विकल्पहरूको साथ। यसले उनीहरूलाई धेरै बहुमुखी बनाउनुको साथसाथै उनीहरूलाई अधिक र अधिक ठाउँ लिन र एकै समयमा बढी संसाधनहरूको उपभोग गर्दछ।
म के गर्न सक्छु ताकि मेरो मोबाईल ढिलो हुँदैन?
सुरू गर्न, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो उपकरणहरूको ढिलोपन को समस्या, लगभग सधैं एक समाधान छ। यो स्पष्ट छ, जस्तो कि हामीले सुरुमा टिप्पणी गरेका थियौं कि यदि हामी छौं पहिले नै धेरै वर्ष पुरानो फोनको साथ, सुधारको लागि कोठा धेरै सीमित छ। फोन भित्रका भौतिक कम्पोनेन्टहरू पनि खराब हुन्छन् जुन अद्यावधिक नगरी सफ्टवेयरको साथ "बढ्दो" हुन्छ।
तर यदि तपाइँको स्मार्टफोन पुरानो छैन, र तपाइँ विचार गर्नुहोस् कि यो प्रदर्शन गर्नु हुँदैन जस्तो कि यो हुनु पर्छ। वा यदि तपाईंले खराब प्रदर्शन देख्नुभयो जुन तपाईंको मोबाईललाई सुस्त बनाउँदछ, तुलनात्मक रूपमा तुलना गर्नुहोस् यदि तपाईं यसलाई छोड्दा यो कसरी थियो, हामी तपाईंलाई दिने छौं। केहि सुझावहरू जुन यसलाई सुरूवात गरे झैं कार्यात्मक बनाउन सक्छ. के तपाईको मोबाईल ढिलो छ? हुनसक्छ केही समयको लागि ...
उपकरण बन्द गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्
यो मूर्ख जस्तो देखिन्छ, र यो हुन सक्छ र यसले काम गर्दैन। तर हामी मध्ये धेरै जो छन् हामीले हप्तामा फोन बन्द गरेका छैनौं। सारा दिन यसलाई चलाए पछि, जब हामी ओछ्यानमा जान्छौं, हामी त्यसलाई छोड्छौं बन्द नगरीकन चार्जरमा जडान गरियो। यदि हामीले यो बानीबाट बाहिर राख्यौं भने, मोबाइल एस पास गर्दछपूरा हप्ता बिना एक बन्द र खोल्दछ.
यदि यो तपाईंको केस हो र तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले कहिले पनि फोन बन्द गर्दैन यो प्रयास गर्न लायक छ, किनकि यो सरल छ र यसलाई गर्न केहि पनि लागत हुँदैन। फोन के साथ केहि सेकेन्डहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरीयो प्रणाली रिसेट भयोहेर्नुहोस् क्यास खाली गर्नुहोस् र नजिक पूर्ण रूपमा अनुप्रयोगहरू जुन पृष्ठभूमिमा श्रोतहरू तान्न सक्छ.
उपकरण खाली गर्नुहोस्
हामीले तपाईंलाई भनेको छै, फोनको मेमोरीको अत्यधिक प्रयोगले यसको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। हामीले सुरक्षित उपकरणमा स्थापना गरेका अनुप्रयोगहरूको समीक्षा गर्दै हामीले केहि लामो समयमै प्रयोग बिना फेला पार्दछौं। दुर्लभ अनुप्रयोगहरूको स्थापना हटाउनुहोस् यो सँधै राम्रो विचार हो।
हामी छिटो ठाउँ प्राप्त गर्छौं, र हामी सँधै तिनीहरूलाई फेरि डाउनलोड गर्न सक्छौं यदि तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक छ भने। र यदि हामी हाम्रो फोनमा पनि अधिक प्रयोग भएको अनुप्रयोगहरू पाउन चाहन्छौं हामी "प्रकाश" संस्करणहरू स्थापना गर्न सक्दछौं अनुप्रयोगहरूको। प्रत्येक पटक हामी अधिक लाइट अनुप्रयोगहरू फेला पार्छौं, धेरै जसो प्रकार्यका साथ तर धेरै कम मेमोरी व्यवसायको साथ। यो यस्तै हो फेसबुक लाइट, गुगल लाइट खोज ईन्जिन, वा मेसेन्जर लाइट, उदाहरणका लागि।
फोटोहरू मोबाइल मेमोरीको भीडभाडको लागि मुख्य कारणहरू हुन्। एक छिटो, नि: शुल्क र धेरै विश्वसनीय समाधान हो तपाईंको फोटोहरू लाई पास गर्नुहोस् गुगल फोटोहरूउदाहरण को लागी। यदि तपाईंसँग एउटा सम्झौता छ भण्डारण सेवा वा के तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ? कम्प्युटर ती विकल्पहरू पनि हुन्। फोटोहरू द्वारा कब्जा गरिएको केहि Gigas छोड्दा, फोन बढी स्वतन्त्र बग्न थाल्छ।
फ्याक्ट्री सेटिंग्स को लागी रिसेट गर्नुहोस्
यो सब भन्दा "कट्टरपन्थी" विकल्प मध्ये एक हो। फ्याक्ट्री सेटिंग्स को लागी रिसेट गर्नुहोस् फोनबाट सम्पूर्ण डाटा मेटाउन समावेश गर्दछ। पक्कै पनि यो सुपर हो पहिले नै जगेडा गर्न महत्वपूर्ण सबै महत्त्वपूर्ण फाईलहरूको। A) हो हामी वास्तवमै जाँच गर्न सक्दछौं कि यो कसरी सुरुमा काम गर्‍यो हाम्रो मोबाइल।
सबै चीज मेटाउँदै हामी सम्भावित खराबीलाई हटाउन निश्चित गर्दछौं। साथै हामी सबै मालवेयर हटाउनेछौं जुन अन्जानमा स्थापना भएको हुन सक्छ हाम्रो मोबाइलमा। कुनै श doubt्का बिना, रिसेट एसयसले उपकरणको काम गर्ने तरिकामा अविश्वसनीय परिवर्तन गर्नेछ.
हामीले स्क्र्याचबाट सबै आवश्यक अनुप्रयोगहरू पुन: स्थापना गर्नुपर्नेछ। यसैले, यदि त्यहाँ केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामीले हामीलाई याद गर्नुहुन्न वा आवश्यक पर्दैन भने, स्पष्ट रूपमा ती समाप्त भए। गणना गर्दै गुगल ड्राईवमा ब्याकअपको साथ, प्रक्रिया यो भन्दा छिटो देखिनेछ जस्तो देखिन्छ। र निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईंको मोबाइल ढिलो छ भने, फ्याक्ट्रि सेटिंग्स पुनर्स्थापना गर्न लायक हुनेछ। हामी देख्न सक्छौं, तिनीहरू हुन् हामी लिन सक्ने विभिन्न उपायहरू हाम्रो स्मार्टफोनलाई पछि के बनाउने प्रयास गर्न त्यो के थियो। यदि तपाईंसँग ढिलो मोबाइल छ भने, मृतको लागि यसलाई दिनु अघि उनीहरूको प्रयास गर्न निश्चित हुनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » एन्ड्रोइड धोखा दिन्छ » मेरो मोबाइल ढिलो छ
शाओमी मी वाच: पैसाको लागि मूल्य खोज्दै
एन्ड्रोइडका लागि best उत्तम क्रसवर्ड खेलहरू